IApartment yeVilla eyiyo [Indlu yokuhlala kaTony Villa]
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguTony
Ifakwe kumbindi wesikhululo seenqwelomoya saseNoi Bai imizuzu eli-10 kude engqonge amasimi erayisi, kude kude nesiphithiphithi sobomi besixeko saseHanoi i-15km, iHomestay yindawo efanelekileyo yokufumana iHanoi, iHalong bay, iSapa, iNinh Binh okanye ukuhamba. Indawo yokuhlala iya kuba likhaya lakho ngokwenene kude nekhaya apho unokonwabela ubomi bemihla ngemihla babantu basekhaya. Njengoko unyuka amanyathelo okuya eHomestay, uyakwamkelwa ngokufudumeleyo njengelungu losapho elinokwabelana ngamaxesha akhethekileyo kunye nenkcubeko yaseVietnam.
Yindawo yokuhlala egqibeleleyo yosapho okanye iqela labahlobo abahamba kunye neebhedi ezintathu zobukhulu benkosi kunye nezindlu zayo zokuhlambela ezi-2 zabucala, zibonelela ngendawo yokuhlala etofotofo, yokuphumla kunye nesikhumbuzo sokuhlala kumagumbi abekwe kakuhle anebalcony / ifestile ejonge indalo yasekhaya kunye nokumanzi kwayo okumangalisayo. -inkcubeko yerayisi enikwe izixhobo zamva nje: i-air-conditioned, amagumbi okuhlambela abucala aneshawa, isomisi seenwele, iTV, idesika yokubhalela, iti kunye nezixhobo zokwenza ikofu, i-wifi yasimahla, ukusetyenziswa kwebhayisekile simahla, ukurenta imoto kunye nokhetho lokhenketho olukhoyo.
Ukubonelela ngokupheka kosapho lwasekhaya lwaseVietnam njengelungu losapho, uya kukonwabela izitya zonyaka, ezilula kunye nezitsha.
Ubumelwane bukhuselekile, njengayo nayiphi na enye indawo ehlabathini; Ndisacebisa ukuba ndilumke xa ndihamba ebusuku kwindawo.
I-Tony villa ikwilali yaseNhue, iKim Chung, indawo yemizi-mveliso yaseThang Long, i-7.5km nje ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseNoi Bai kwaye idibanisa indlela ephakathi malunga ne-15km ukuya eLake Hoan Kiem, kwikota eNdala, eHo Chi Minh Mausoleum, eWest Lake. Ukujikelezwa ngamasimi erayisi, umlambo kunye namachibi anomoya omtsha kakhulu, indawo enokuthula kunye neendawo zokuhlala ezihlala kwilali.
Kwimozulu eshushu ehlotyeni kukho impepho emnandi epholileyo evela ngaphaya kwamasimi erayisi. Indawo yethu izolile, ikhululekile kwaye ikhuselekile. Thatha ukhwele ibhayisekile okanye uhambe emasimini erayisi, ujonge imihla ngemihla yenyathi yamanzi kunye nabahlali besenza umsebenzi wabo wemihla ngemihla.
Umbuki zindwendwe ngu- Tony
-Ukuziva usekhaya, wamkelekile ukuba usebenzise ikhitshi ukupheka kunye nefriji ukugcina ukutya kwakho.
-Unokufikelela kwi-Wifi kuyo yonke indawo endlwini
-Unokuhlala kwisofa kwigumbi lokuhlala ukuze uncokole kwaye ubukele umabonwakude apho.
- Unokusebenzisa umatshini wokuhlamba impahla yakho okanye unokucela umntu ococayo akuncede kwindawo yokuhlamba kunye noku-ayina.
- Ukwabelana ngamava asekuhlaleni ohambo